Izingane zihlangabezana nokuphila kwansuku zonke ngokusebenzisa idoli kanye nefolishi ifenisha
Izidakamizwa kanye nefenisha ifenisha
Ifenisha yeDoyl iphinde ithuthukise amakhono olimi ngokusebenzisa imidlalo yokudlala
Ifenisha yeDolli ifanisa impilo yansuku zonke
Ifenisha yedoli ihambelana kahle namakamelo amaningi ezingane. Ngezingane zensimbi yefenisha zingadala umhlaba wabo womdlalo. Kodwa ingabe ifenisha yedoli nayo ifaneleka njengethoyi lokufunda?
Ikhwalithi yeDolk - sebenzisa impilo yansuku zonke
Impendulo lapha ecacile "yebo" - futhi ngezindlela eziningi.
Inhlanhla yokudoba kanye nedoli
Izingane zifunda emdlalweni ngokufaka indima ethile bese ziqhuba ukuziphatha okulungiselelwe okungaphezulu noma okuncane.
Ifenisha yeDolk, njengoba ungathenga ezitolo eziningi zamathoyizi enkuni, yakha izimo eziphelele ukuphendula impilo yomuntu omdala.
Ifenisha yeDolon inikeza ingane into ecacile kakhulu, eyenza ifane nesimo lapho izingane zikhunjuzwa khona "ngokuphila okulungile". Lokhu kusho ukuthi izingane zifakwe ifenisha yedoli ukuze ziphinde zilandele ukuziphatha okuphawulwe abazali babo.
Ngenxa yalokho, kunomphumela wokufunda kabili
Okokuqala, izingane zilingisa ukuziphatha kwabantu abadala kule ndawo. Lokhu kusho ukuthi ifenisha yezingane zadoli ibenza bakwazi ukwenza imisebenzi ethile yansuku zonke futhi ngaphezu kwakho konke ukuthola incazelo ngemuva kwabo. Ngokuqinisekile umuntu angazama ukuchaza ingane ukuthi kungani ithoyizi ingekhabethe noma kungani isinkwa sifakwa kuhhavini.
Kuphela lapho ingane inikwe amandla ukulingisa lezi zenzo kuyoqinisekisa ukuthi uye waqonda ngempela ukuthi umama noma ubaba wenza kanjani ngale ndlela. Ukulingisa okudlule kuyisinyathelo esibalulekile ekufundeni amaphethini omphakathi. Ngamafuphi: ngefenisha yedoli, ingane inikezwa ngendawo yokuqeqesha lapho ingazijwayeza khona futhi isebenzise impilo yabo yansuku zonke.
Lokhu kubangela isici sesibili, esibalulekile. Kungase kuzwakale sengathi ifenisha engavamile, kodwa ifenisha yokudoba ingaba nenzuzo kakhulu ekuthengeni ulimi kwengane. Isiqalo sokuqala lapha futhi ukuthi ifenisha yenodoli yakha imvelo efana kakhulu nalokho abazali abakwenzayo. Yiqiniso, ukuziphatha kwabazali kudinga ukuthi bakhulume.
Ingane ithola futhi ithuthukise amakhono akhe olimi ngokulingisa abazali. Njengoba sekushiwo kakade, ifenisha yenodoli yenza kahle imvelo lapho izingane zikhuthazwa khona ukuvuselela ukuziphatha kwabazali ngokuningiliziwe. Uma ingane yakho idlala namadonki akhe kule ndawo, izosho izinto ezifanayo noma ezifanayo ozenza njalo.
Kusukela kumbono wokubheka, omunye angasho lapha, ingane yakho ikhiqiza izenzo zakho zokukhuluma ngezimo ezifanele zokusebenzisa ezifanele. Izingane zijwayele ukusebenzisa imisho ethile namagama ngendlela efanele. Futhi yilokho okusiza umntwana ukuba aqonde incazelo yamazwi kangcono.
Ifenisha yeDoll imane ikhuthaza ukuthuthukiswa kwengane ngokufanisa indawo lapho izingane zingenza khona ukuziphatha komphakathi kanye nokuziphatha okuhambisanayo. Kodwa-ke, ayikho indawo eyanele kuwo wonke ama-nursery ukusetha ifenisha eyodwa noma ngaphezulu.
Kodwa-ke, uma ungafuni ukuyeka izingane zakho insimu yokuzikhandla ukuze uphinde uphinde usebenzise ukuziphatha komphakathi, ungazuza umphumela ofanayo ngokusebenzisa udokotela. Ngesidakamizwa, ingane yakho izothola imvelo ekulungele ukubuyisela isipiliyoni. Futhi, ingane yakho ingayilingisa futhi isebenze ukuziphatha komphakathi ezimweni eziyiqiniso.
Isikole sesonto lokufundela